Coronavirus Manakaiky ny 1300 ny voa …
Niampy 18 ireo marary vaovao ka nampiakatra ny isan’ireo voa hatrizay ho 1290, izany hoe 10 sisa dia ho tratra ny 1300. 7 tamin’ireo tranga vaovao no teto Antananarivo, 10 tany Toamasina, 1 tany Analanjirofo izay ao anatin’ny faritanin’i Toamasina ihany, ary ny 1 tany Ihorombe.
131 fitiliana natao, ka ny IPM nanao 112 izay nahitana tranga 16, ary 19 kosa ny fitiliana nataon’ny HJRA, ka ny 2 tamin’ireo no voamarina fa voa. Ny 17 kosa ny sitrana vaovao ka 384 ny fitambarany izay manome 29,76% eo, ary 897 kosa no mbola manaraka fitsaboana izay manome 69,53% amin’ny olona voa hatrizay. 9 kosa ny marary mafy na “forme grave” (04 Morafeno Toamasina , 01 Hopitaly Analakininina Toamasina , 04 Befelatanana). 15 981 kosa ny fitiliana vita hatrizay, izany hoe 8,07% eo ny taham-pahavoazana, izany hoe 185 isan’andro eo ny salan’isan’ny fitiliana vita tao anatin’ny 86 andro teo.